मलाई फुर्सद दिनुहोस् विश्लेषण र को नवीनतम समाचार ल्याउने उद्देश्य संग 2017 मा स्थापित भएको थियो चलचित्र संसार हाम्रो इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरु लाई। यहाँ तपाइँ सबै विषयहरु को फिल्महरु मा लेख को एक ठूलो संख्या मा, साथै संगीत को दुनिया मा पाउनुहुनेछ। बाट सांगीतिक इतिहास, संगीत श्रद्धांजलि, हाम्रो समय र अघिल्लो को सबैभन्दा सान्दर्भिक समूहहरु बाट नवीनतम समाचार को माध्यम बाट जाँदै।
यी लेखहरु को सबै लेखकहरु को हाम्रो शानदार टीम द्वारा बनाईएको हो, जुन तपाइँ तल देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ उनीहरु मा सामेल हुन चाहानुहुन्छ तपाइँ हामीलाई मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ निम्न फारम। यदि, अर्कोतर्फ, तपाइँ साइट मा कभर गरीएको र श्रेणीहरु द्वारा व्यवस्थित विषयहरु को सम्पूर्ण सूची हेर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ यो पृष्ठ.
मलाई चलचित्र र संगीत मन पर्छ। मँ सधैं नयाँ रिलीज को लागी ध्यान दिन्छु, चाहे इन्टरनेट मा, पत्रिकाहरु, ... जे भए पनि! मेरो सबैभन्दा राम्रो योजनाहरु मध्ये एक एक मायालु संग एक आलसी दिउँसो खर्च गर्न को लागी हो ... यो सबै भन्दा राम्रो को लागी हो। र मँ लेखन र रमाईलो को दुनिया मा के हुँदैछ को बारे मा सबै गर्न सक्छु साझा गर्न को लागी मज्जा लिन्छु।